Daawo MUUQAAL: Musharax Tarsan oo shaaciyey Sir culus oo ku saabsan Wada hadalka Dawlada Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland!! | kowtharmedia.com
Home MAQAALO Daawo MUUQAAL: Musharax Tarsan oo shaaciyey Sir culus oo ku saabsan Wada hadalka Dawlada Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland!!
Daawo MUUQAAL: Musharax Tarsan oo shaaciyey Sir culus oo ku saabsan Wada hadalka Dawlada Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland!!
Nov 25, 2016MAQAALO, MUUQAAL
Gudoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan) oo ah Musharax u taagan Xilka madaxwaynaha Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday Sir Culus oo ku aadan Wadahadalka u dhexeeya Dawlada Soomaaliya iyo maamulka Somaliland, iyo Waliba sidoo kale qaabka uu ku bilowday.
Dhinaca kale Tarsan ayaa wuxuu sheegay in maamulka Somaliland Aqbalay in mudo 10 sano ah oo iskood isku sii maamulo, Islamarkaana intaasi waxii kadabeeyo uu qaato Midnimada Soomaaliya, Waxaana sidoo kale La waydiiyey Su’aalo kala duwan.
muuqaalka halkaan Kadaawo
Previous PostCumar Dhagey “Baarlamaanka cusub ayaa go’aan ka gaaraya xilliga ay dhaceyso doorashada Madaxweynaha Soomaaliya” Next PostCiidanka NATO oo Dagaalkii Burcadbadeeda Soomaalida Joojisay iyo Iyga oo sheegay in ay sii aadi doonaan Badweynta Liibiya ee maraan Tahriibayaasha!!